Badhasaabka Awdal Oo Ka Warbixiyay Mashaariic Dib Dejin Loogu Samaynayo Dadkii Ku Dhibaatoobay Duufaantii Sagar | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Badhasaabka Awdal Oo Ka Warbixiyay Mashaariic Dib Dejin Loogu Samaynayo Dadkii Ku Dhibaatoobay Duufaantii Sagar
Boorama (SDWO.com): Badhasaabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali, ayaa sheegay in dib u xoolayn loo samaynayo dadkii ay waxyeeladu ka soo gaadhay duufaantii Sagar ee ku dhufatay xeebaha gobolkaasi.
Cabdiraxmaan Axmed Cali, ayaa tilmaamay in ay diyaariyeen mashaariic lagu taakulaynayo dadkii ay waxyeelaysay duufaantii Sagar ee horaantii sanadkan ku dhufatay xeebaha gobolka Awdal, barnaamijyadaasi oo ay ka mid yihiin Kalluumaysiga iyo beeraha.
Badhasaabka Awdal waxaa uu sidan ka sheegay hadal uu ka jeediyay kulan uu maanta xafiiskiisa kula yeeshay isu-duweyaasha gobolka, maayarka Boorama iyo madaxda saddex hay’addood.
Waxaanu yidhi “Waxaanu isla garanay sidii dib loogu bilaabi lahaa qodobadda ay ka midka yihiin in dadkii xeebaha ku barakacay loo sameeyo mashaariic dhanka Kalluumaysiga ah, si ay nolosha qoysaskooda ugu tiiriyaan Kalluumaysiga.
Kale in beeraha dib u habayn loogu sameeyo, haddii ay noqoto dhanka dagalagga, mishiinadda, carro- guurkii beeraha kaga dhacay iyo in dib u xoolayn loo sameeyo dadkii ku xoollo beelay duufaantii Sagar”.
Waxa kaloo uu ka warbixiyay guddoomiyaha Awdal waxyaabaha la taaban karo ee ilaa hadda loo qabtay dadkii ay dhibaatadu ka soo gaadhay duufaantii Sagar.
“Waxyaabaha dadkaasi loo qabtay na waxaa ugu weyn dib u habayn iyo dayactir loogu sameeyay iskuuladdii, meelihii biyaha ay ka cabayeen, goobihii caafimaadka iyo meello kale” ayuu Cabdiraxmaan Axmed Cali.
Dhanka kale Cabdiraxmaan Axmed Cali, waxaa uu faahfaahin ka bixiyay u jeedadda shirka uu la yeeshay isuduweyaasha gobolka iyo maamulka degmadda, isu-duweyaasha iyo masuuliyiinta hay’adahaasi.
Isagoo arrimahaas ka hadlayayna waxa uu yidhi “Shirka aanu halkan ku qabanay oo ay goob joog ka ahaayeen isu-duweyaasha gobolka, maayarka magaaladda Boorama iyo madaxda saddex hay’addood oo kala duwani, waxa uu noogu soo dhammaaday guul.
Waxaanu ka wada hadalay na waxa ugu weynaa dib u bilaabista mashruucii ka soo kabashada abaarihi iyo dhibaatadii ay ka tagtay duufaantii Sagar.
Ilaa mudadaasina waxaa la waday waxay ahayd dhiig joojin, laakiin waxaa la sameeyay aanay ahayn ka soo kabasho, ee ay ahayd sidii dadkii duufaantu waxyeeshay wax loo gaadhsiin lahaa”.